Raw SA47 (792236-07-8) bixiyeyaasha hplc x98% | AASraw
Boggaga qaar ayaa lagu turjumay barnaamijka oo ma aha mid sax ah, fadlan isku day inaad eegto English aragti faahfaahin fiican.
/Products /Xabbad dufan leh/ SA 47
Rating: Category: Xabbad dufan leh Tags: iibso SA 47, SA 47, SA 47 iibka, Bixiyeyaasha SA 47
SA 47 waa kafakooliye FAAH-ga oo xulasho leh si loogu isticmaalo miisaan lumis. AASraw waxay bixisaa nadaafad aan ka yarayn 99% SA 47 waxaa loo isticmaalaa kuwa jidh-dhiska ama shaybaarrada dhulka hoostiisa miisaanka. Waxaan nahay SA47 alaab-qeybiyeyaal, SA 47 iibinta, ..
I.SA 47 Calaamadaha aasaasiga ah:
Nooca Naafada ah: C17H26N4O3
Miisaankani waa: 334.41
milmi DMSO ilaa 100 mM 1eq. HCI ilaa 50 mM ethanol ilaa 50 mM
II. SA 47 isticmaalka wareega:
SA 47 budada
Isticmaalka 2.SA 47:
Qiyaasta 88 mg / kg ee hal daroogo, qaabka isbeddelka qiyaasta ee jiirka waa: ku dhufo 88 mg / kg adigoo isticmaalaya jaangooska Km kumbuyuutarka (3) oo u kala qaybsanaanta isku-darka km KMG (6) Qiyaas u dhigma 44 mg / kg ayaa laga helay jiirka.
6. SA 47 Cunnada:
7. SA 47 Suuq geynta:
IV. Sida loo iibsado SA 47 ee AASraw?
Haweeney Viagra Waxkasta oo ku saabsan jimicsiga xoojinta jilicsanaha jilicsan Sida loo isticmaalo Clinbuterol miisaanka lumitaanka Waa maxay budada nandrolone loo isticmaalo faa'iidooyinka / nandrolone?
Waxaan caadi ahaan ka jawaabnaa saacadaha 8.
Guud ahaan bilaash ahaan lacag la'aan ah iyo qaar ka mid ah waddamada qaarkood, waxaan kuu ballan qaadaynaa inaad alaabtaas hesho.
Noqo kuwa ugu horreeya ee dib u eega "SA 47" Cancel reply
Your dib u eegis*
Galmada Horumarinta Deedaha (14)
Isticmaal lab ah (7)
Dawooyinka PCT (10)
Qaar kale waxay (12)
Sidee loo isticmaalaa Lorcaserin si loo daaweeyo cayilka?
Ka iibso budo badan oo Tadalafil online ah: Wax walba oo aad u baahan tahay inaad ogaato !!!
WWL70 daaweynta anti-bararka ayaa joojiya daaweynta PGE2 iyo PGE2-G
IDFP (615250-02-7): Saameyn, Qiyaas, Qiimeyn
Levonorgestrel: Sida ay u shaqeyso, u isticmaasho, saameynaha dhinaca
Vagelis on Budada Stanozolol ee dhiska jirka: 16 xaqiiqooyinka waa inaad ogaatid !!!
Dr. Patrick Young on Soo iibso testosterone Biyo badan ku dhalaal
Haitham A on Soo iibso testosterone Biyo badan ku dhalaal
Dr. Patrick Young on Ka iibso maadada Clenbuterol Raw-booga internetka si badbaado leh
Edward Corlett on Soo iibso testosterone Biyo badan ku dhalaal